Ọkachamara ọkachamara iPhone arụ ọrụ na Barcelona | Esi m mac
Egburu | | iPhone, Noticias, ọtụtụ
Onye na-achọghị ihe iPhone! Onye na enweghi iPhone! IPhone bụ ngwaọrụ kachasị nwee ọfụma n’ụwa, ihe kacha chọọ, na ndị na-enweghị ya ga-akwụsị ịzụta ya. Ndị ọrụ IPhone dị ọtụtụ iri nde na Apple na-ahapụwanye ụdị na ụdị ọnụahịa dị ọnụ ala. Nke a ga - enye ohere ka ọnụọgụ ndị ọrụ iPhone ga - aga n’ihu na - eto eto na tupu ọnọdụ a, ị nwere ike wepụta ọganiihu ọkachamara ga - aga n’ihu site na ị bụrụ ọkachamara na ya. Agụụ Mmezi iPhone na Barcelona. Gụọ na-achọpụta na ọ dị mfe ịmalite ọrụ na ihe kachasị amasị gị.
Apple's iPhone bụ otu n'ime smartphones kachasị oke ọnụ ebe ahụ ma ya mere nrụzi gọọmentị dịkwa. Dị ka ndị dị otú a, ọchịchọ maka ọkachamara ọkachamara iPhone arụ ọrụ na-eto eto.
Na Agụụ Mmezi iPhone nke Aula Informática Profesional nyere, ị ga-enweta ihe omuma na usoro dị mkpa nke ga - enyere gị aka ịrụ ọrụ mmezi ọ bụla ma ọ bụ nrụzi iPhone n'ụzọ kachasị dị irè, nke ọma na nke ọkachamara.
Usoro na ọdịnaya
El Agụụ Mmezi iPhone Ọ na-eme na ihu ihu ihu na klaasị a haziri ahazi na Aula Informática Profesional Training Center na Barcelona. N'ebe ahụ, ị ​​ga-enwe ihe niile dị mkpa iji mụta otu esi emezi nsogbu ọ bụla na iPhone.
Ọ bụ nnoo usoro bara uru na-eduzi ma na-adụ ọdụ site ọkachamara iPhone idozi nkụzi.
Site na ubochi mbu ị gha enwe ihe omuma ihe dika ihe eji eme ihe maka nke aka gi ma etinyekwara ya dika onyinye na mmezu nke uzo: welders, bọket, egbe egbe oku, ndi nlere, wdg.
N'ime usoro ọzụzụ ahụ dum, ị ga-amụta ịrụzi mmebi ọtụtụ ugboro na iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6 ma ọ bụ 6 gbakwunyere n'ụzọ kachasị ọkachamara:
Agbaji agbaji (iko / aka)
Broken ihuenyo (LCD)
Wet / iru mmiri
Ebe nkwụ ụgwọ
Nnukwu ihe mmetụta
Mgbe ị rụchara nke ọma Agụụ Mmezi iPhone, ị ga-enweta a Ulo akwukwo nke Federació Empresarial Catalana de Formació nyere ikike site na Spanishlọ Ọrụ Spanish nke Computerlọ Ọrụ Nkụzi Kọmputa, ma ị ga-abụ akụkụ nke oflọ Ọrụ Na-arụsi Ọrụ Ike.
Echela ya ọzọ ma chọpụta na-enweghị nkwa ọ bụla ebe a. Na mgbakwunye, ị nwere ike irite uru na a 10% ego pụrụ iche ma ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ, enweghị ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ onwe gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iPhone » Ọkachamara ọkachamara idozi iPhone na Barcelona
Mark Gurman kwadoro otu atụmatụ nke 5s maka iPhone SE